Laser Die Cutting na n'ịtụgharị maka Label, nrapado Materials, Ochie-reflective Nyefee Film - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser Die Cutting na n'ịtụgharị maka Label, nrapado Materials, Ochie-reflective Nyefee Film
Laser Die Cutting na n'ịtụgharị Machines
Golden laser - laser usoro maka ịnwụ ọnwụ na finishing OF Labels
About Digital n'ịtụgharị System
Na ngwa mmepe nke ọha mmadụ na diversification na individuation nke ndụ ndị mmadụ mkpa, digital technology e-akwalite na-ebi akwụkwọ na ụzọ e agbanwe mgbe niile. Digital ebi akwụkwọ aghọwo ihe irreversible emekarị na ụlọ ọrụ, dị ka a na-eto eto ọnụ ọgụgụ nke obere ọsọ ulo oru, obere-ọnụ ọgụgụ ahaziri ulo oru, na environmentally-enyi na enyi, na-eri ịzọpụta chọrọ.
Ahaziri dijitalụ obibi-adọta ndị ọzọ na ndị ọzọ labelụ na ngwugwu-ebi akwụkwọ na-emepụta, n'ihi ya ngwa ngwa ọsọ, elu mma, ọgụgụ isi mmepụta na akpaaka usoro.
Ka dijitalụ obibi na-amụba, otú laser anwụ ọnwụ!
Anyị echiche bụ inye ahịa na a na nso nke labelụ gụchara ngwọta. Anyị modular, elu-arụmọrụ labelụ laser anwụ ọnwụ na gụchara ngwọta na-iji izute gị na-atụ anya na evolving azụmahịa mkpa, otú i nwere ike na-enye otutu labelụ ngwọta na gị ahịa.
Gịnị bụ uru nke laser anwụ ọnwụ nke kpọọ?
Golden laser si laser anwụ na-egbutu igwe na-ukwuu ekele labelụ emepụta dị ka ha nwere ike ịmepụta a nnukwu dịgasị iche iche nke kpọọ na otu, elu-ọsọ, n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka usoro.
Oge na-azọpụta. Ọ dịghị mkpa ka Ebu, na iwepu cumbersome Ebu na-eme oge.
Ịcha ihe na ndịna ga-agbanwe n'oge ọ bụla. The Laser dị na a dịgasị iche iche nke configurations: na otu ma ọ bụ abụọ laser isi iyi.
The Galvo usoro na-enye ohere na doo ịkwaga nnọọ ngwa ngwa, a na-ahụ n'ụzọ zuru okè focalized on dum na-arụ ọrụ ebe. Akwa-agba ọnwụ ka afọ ju ndị ahịa 'mkpa na ozugbo.
Ụwa klas CO2 RF laser isi iyi. Ogo nke ịkpụ bụ mgbe zuru okè na mgbe nile karịrị oge na ala na-eri nke mmezi.
N'ihi na nkenke ọnwụ na zuru ezu gbakwasara akụkụ. Nke a ngwaọrụ emesi elu ọnwụ nkenke ọbụna mgbe ịcha kpọọ na oge ufodu ọdịiche.
Modular multi-ojii na ọrụ dị ka flexo obibi, laminating, UV varnishing, slitting, na rewinder, wdg
Kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ a dịgasị iche iche nke ihe onwunwe
Kenkowaputa akwụkwọ, Mat akwụkwọ, kaadiboodu, polyester, polypropylene, plastic, film, wdg
Adabara dị iche iche di iche iche nke ọrụ
Laser anwụ ịcha ụdị ọ bụla nke na udi - zuru ọnwụ na susuo-ọnwụ (ọkara ọnwụ), perforating, osise, na-akanye, bụ ndị, wdg
Golden laser - Laser Die Ịcha Machine Introduction
Golden Converse bụ nke mbụ ụlọ ọrụ dị na China na-ewetara laser anwụ-ihe-ubi technology n'ime mkpo & labeling ụlọ ọrụ. Ya modular multi-ojii elu-ọsọ laser anwụ-ihe-ubi igwe nwere ike dochie a usoro nke omenala otu ọrụ na ígwè ọrụ dị otú ahụ dị ka omenala anwụ na-egbutu igwe, slitting igwe, laminating igwe, ghọọ flexo ebi akwụkwọ igwe, punching igwe, na rewinder.
Anyị laser anwụ ọnwụ na gụchara ngwọta nwere ike n'out oge imeta flexo obibi, laminating, ọnwụ, ọkara ọnwụ, scribing, punching, osise, Oghere Usoro ọnụ, na-ekpo ọkụ stamping na slitting . Ọ-azoputa na-eri nke multiple ngwá ego, na ndị na-eri nke oru na nchekwa maka ibipụta na nkwakọ Nsukka. Ọtụtụ-eji ígwè obibi akwụkwọ kpọọ, nkwakọ igbe, kaadị ekele, ulo oru etere na ndị ọzọ ọrụ.
Golden laser Atụmatụ - QR Code / Barcode Vision Ịghọta System
Ịcha nọgidere, seamlessly ịgbanwe ọrụ na-na-ada.
Camera na-akpaghị aka-enyocha kwa ịmata QR code / barcode.
Iwepu ihe onwunwe n'efu.
Efu ọnọdụ oge nke ndịna mgbanwe, nke kacha mma na onye òtù ọlụlụ nke dijitalụ na-ebi akwụkwọ.
Model Mba LC350
Web Obosara 350mm / 13.7 "
Oke Web dayameta 600mm / 23,6 "
Web Speed 0 ~ 80m / min (Speed ​​dịgasị iche ndịna, ihe, thicknesses)
laser Source Kaakwa ya akara CO2
Laser Cutting nkenke ± 0.1mm
Laser Cutting Obosara 340mm
Ịnye ọkụ 380V 50Hz / 60Hz, Three adọ
Model Mba LC230
Web Obosara 230mm / 9 "
Oke Web dayameta 400mm / 15.7 "
Laser ọnwụ nkenke ± 0.1mm
Modular imewe, ọzọ mgbanwe nke ọkọlọtọ na ịnara configurations
Standard nhazi: unwinding + web ndu + laser anwụ ọnwụ + n'efu mwepụ + otu asọfe
More nhọrọ: dijitalụ obibi / oyi foil / ghọọ / ihuenyo-ebi akwụkwọ / ewepụghị ọnwụ / ọkụ stamping / gburugburu mma anwụ ọnwụ / abụọ asọfe ...
Akwụkwọ, kaadiboodu, reflective ihe, 3M ulo oru teepu, eyi, PITA, polyimide, polymeric, plastic na film ihe, wdg
na ọdabara Industries
Food na onunu kpọọ, ntecha kpọọ, ezinụlọ ngwa oru kpọọ, electronic ngwaahịa kpọọ, reflective kpọọ, nkwakọ onyinye igbe, electronic akụrụngwa gaskets, wdg
ỤFỌDỤ OF Labels sample
Egwu ọrụ laser ịnwụ ọnwụ igwe mere!
Ngwa Industry na Ahịa Case Ịkekọrịta
Digital-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ
Ngwa ngwa na ndị ọzọ echekwa labelụ mmepụta technology
E Company bụ a emeputa nke e biri ebi kpọọ n'ihi na ihe karịrị afọ 50 na Central America. Na-abawanye na obere-olu ahaziri iwu, ndị na-eri nke omenala anwụ-ihe-ubi nke kpọọ dị elu izute ahịa rịọrọ nnyefe ụbọchị.
Ná ngwụsị nke 2014, ụlọ ọrụ na ẹkenam nke abụọ-emana digital laser anwụ ọnwụ na finishing usoro LC-350 si ọlaedo Converse, na laminating na varnishing ọrụ izute ahịa 'ọzọ ahaziri mkpa.
Ugbu a, ụlọ ọrụ na-kasị mmepụta isi nke e biri ebi kpọọ na nkwakọ ngwaahịa na mpaghara, na emewo meriri ọtụtụ enọ si obodo ọchịchị, na-aghọ ndị kasị asọmpi labelụ mmepụta ụlọ ọrụ.
Obere-format ghọọ + laser anwụ na-egbutu abụọ-na-otu ngwaọrụ
T ụlọ ọrụ bụ a German emeputa nke dijitalụ obibi kpọọ na a ogologo akụkọ ihe mere eme. Ọ nwere nnọọ ike ụkpụrụ na chọrọ maka akụrụngwa ị nweta. Tupu ha maara Golden Converse, ha nile equipments e zụrụ na Europe, na ha chọsiri ike ịhụ obere-format UV ghọọ + laser anwụ na-egbutu abụọ-na-otu omenala igwe. Na 2016, dị ka chọrọ nke T ụlọ ọrụ, ọlaedo laser mepụtara ahaziri laser anwụ ọnwụ igwe LC-230. Na nkwụsi ike na elu àgwà ọnwụ mmetụta, ọ na-ukwuu ekele ahịa. Ka anya dị ka ndị ọzọ na European labelụ ụlọ ọrụ nwetara ozi ọma, ha kpọtụụrụ Golden laser na ọrụ Golden Converse na-emepụta dijitalụ labelụ laser ọnwụ na gụchara na sistemụ na-izute mkpa ha n'otu n'otu.
M ụlọ ọrụ, ndị ụwa na-eduga emeputa nke e biri ebi kpọọ, zụrụ laser anwụ ịcha igwe si Italy a afọ iri gara aga. Otú ọ dị, European akụrụngwa dị oké ọnụ ma na oké ọnụ ịnọgide na-enwe, ha na e na-agbalị ịchọta otu ụdị laser anwụ ọnwụ igwe. Na Labelexpo 2015 na Brussels, anya ha mụnyere mgbe ha hụrụ LC-350 laser anwụ ọnwụ igwe si ọlaedo Converse.
Mgbe ugboro ugboro ule na nnyocha, ha mesịrị họọrọ Golden laser LC-350D abụọ-isi elu-ọsọ laser anwụ ọnwụ igwe na mma na-eri arụmọrụ. The usoro na-agba ọsọ na gbapụrụ ọsọ ruo 120 m / min, na ọkara rotary ọdụ, mpịakọta-to-mpempe akwụkwọ ndibọbọ nyiwe na ndị ọzọ na ndị ọzọ na usoro aka kwukwara uru nke ndị ahịa na ngwaahịa.
Uwe na akpụkpọ ụkwụ ngwa ụlọ ọrụ
Ochie-reflective ihe onwunwe laser ọnwụ
R ụlọ ọrụ bụ ndị kasị ibu n'ụwa akwa ngwa nhazi otu ụlọ ọrụ. Ha ẹkenam ihe karịrị 10 tent nke Golden laser Mars usoro XY axis laser ịcha igwe ọtụtụ afọ gara aga. Dị ka iwu na-abawanye, ha ẹdude akụrụngwa ike izute ya mmepụta mkpa. Golden laser azụlitewo a laser anwụ-ihe-ubi usoro maka ya customization, nke na-bụ-eji maka na ọnwụ nke reflective ihe.
Single / Ugboro abụọ Side nrapado etere
General e ji mara ụdị etere:
The kasị mpịakọta obosara ga-350mm
ọkpụrụkpụ site 0.05mm ka 0.25mm
Full ọnwụ na nsusu ọnụ ọnwụ na mpịakọta etere